နားဦးတည့်ရာ ခုနှစ် – Doris Day (Que Sera, Sera – Whatever Will Be, Will Be) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Music » နားဦးတည့်ရာ ခုနှစ် – Doris Day (Que Sera, Sera – Whatever Will Be, Will Be)
နားဦးတည့်ရာ ခုနှစ် – Doris Day (Que Sera, Sera – Whatever Will Be, Will Be)
Posted by မြစပဲရိုး on Feb 7, 2015 in Music | 16 comments
ငြင်းဖို့ အားယူနေတုန်း အကြောင်းတွေ ပွါးပွါးလာတာမို့ ဘယ်ကစ ရမလဲ အတော်စဉ်းစားနေရပါ့။
ပထမဆုံး artificial intelligence လို့ ခေါ်တဲ့ အေအိုင် ကို ကွန်ပျုတာ ဂုရုကြီး ဘီလ်ဂိတ်စ် ကိုယ်တိုင် ဘာလို့ ကြောက်နေရတာ လဲ ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမြင် လေး ကို မျှပါရစေ။
တကယ်ဆို အတု ဟာ အတုဘဲ အစစ် ကို ဘယ်လို မှီပါ့မလဲ နော။
ပြောသာပြောရ။ နောင်အနာဂါတ် မှာ လူ တွေ ရဲ့ အလုပ်တော်တော်များများ ကို အသိဉာဏ် အတု နဲ့ စက်များ က ခြိမ်းခြောက် စပြုလာပြီ။
ကလေး ကို တောင် ပြောမိသေး။
တက္ကသိုလ်မှာ ဘာသာရပ် ရွေးရင် စက်ရုပ် တွေ ဝင်မလုပ်နိုင်တာ ရွေး လို့ ပြောပြီး အဲဒါ ဘာတွေ လဲ ဆိုတာ စဉ်းစား လိုက်ကြတာ။
စက်ရုပ် မလုပ်နိုင်မဲ့ အလုပ် အတော်ရှားနေတော့မှာ။
အဆုံးစွန် ဆရာဝန် အလုပ်တွေ မှာ ပရိုဂရမ် ကောင်းကောင်း လုပ်လာနိုင်တဲ့ တစ်နေ့ စက်ရုပ် နဲ့ ဆေးကု နိုင်တော့ မလားဘဲ။
အခုတောင် အွန်လိုင်း မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ တွေ ထည့်လိုက်ရင် ဘာ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ ပြောနိုင်တဲ့ ဆိုက် တွေ ရှိနေတာ။
ရမ်းကု သဘောတော့ ဖြစ်မှာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ သေချာတာ က ဆရာဝန် တွေ စဉ်းစား သလို အတိုင်း စဉ်းစား တဲ့ ပရိုဂရမ် ကို လူ နဲ့ တူတဲ့ စက်ရုပ်ထဲ ထည့်ခိုင်းနိုင်တော့မယ် ထင်ရဲ့။
နောက် အလုပ် တစ်ခု က စာသင်တဲ့ ဆရာ အလုပ်။
လက်ရှိမှာ ကို အွန်လိုင်း နဲ့ ရှင်းပြ တဲ့ သင်ခန်းစာ တွေ၊လေ့ကျင့်ခန်း တွေ၊ အမှား အမှန် စစ်ပေးတာ တွေ အတော်လေး ခေတ်စားလာနေတော့ သိပ်မကြာတဲ့ ကာလ မှာ အခန်းထဲ မှာ ဆရာ က ဝင်သင် စရာ မလို ဘဲ ဗီဒီယိုကွန်ဖရန့် တွေ နဲ့ သင်တော့ မလားဘဲ။
ဒါမှဟုတ် အင်မတန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ စက်ရုပ် ဆရာ/မ က ဝင်သင်မှာပေါ့။
စားဖိုမှူး တွေလဲ ချောင်မှာ မဟုတ်။
စစ်သား တွေလဲ နေရာပျောက် ဖို့ သိပ်မဝေးတော့။
အခုတောင် မောင်းသူ မလို တဲ့ တင့်ကား တွေ၊ တိုက်လေယာဉ် တွေ စသုံး နေပြီကော။
ဒါတွေ ကို ပရိုဂရမ် ရေး တဲ့ ပရိုဂရမ်မာ အလုပ်တောင် Coding ဘဲ လုပ်တတ်သူ ဆို ပရိုဂရမ် ရေး တော့ မဲ့ စက်ရုပ်ပရို ဂရမ် တွေ နဲ့ ပြိုင်ရတော့မှာ။
ဒီဇိုင်း စဉ်းစားနိုင်သူ ဆို နေရာမြဲနိုင်သေးတယ်။ ဒါတောင် တော်တော် မြင့်တဲ့ လယ်ဗယ် မှ စိတ်ချရ မလားဘဲ။
မင်းသား၊ မင်းသမီး တောင် လူနဲ့ ချွတ်စွပ်တူ တဲ့ ကွန်ပျုတာ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း တွေ ဖြစ်လာလို့ ကတော့ လူတွေ နဲ့ ရိုက်ပါတော့မလား။
ဂျပန်မှာ လူနဲ့ အင်မတန်တူ တဲ့ မိန်းမရုပ် တွေ စပေါ်နေပြီ ကြားတာဘဲ။
အသိဉာဏ် အတု ထည့်လိုက်နိုင်ရင် ဘယ်လို ဖြစ်ကုန်မယ် မသိ။
ရှေ့နေ တို့ ၊ တရားသူကြီး တို့၊ လွှတ်တော်ထဲ က အမတ်များတို့ ကတော့ စက် နဲ့ အစားထိုးနိုင်/မနိုင်။ မသိ။
ဆက်ပြောရင် ကုန်မယ် မထင်။
အဲဒီ တီထွင်မှု တွေ ကနေ ကောင်းကျိုးထက် လူတွေ ကို အန္တရာယ်ပြု မဲ့ ဆိုးကျိုး တွေ ဖြစ်လာမှာ ကို ဘီလ်ဂိတ်စ် က စပြီး စိုးရိမ်လာတာပါ။
အမှန်တော့ ကျွန်မ လို လူပြိန်း က တွေးရင်တော့ အေအိုင် ဆိုတာ လူတွေ က တွေးပြီး ရေးထား တဲ့ ညွန်ကြားချက် အစုအဝေး ပရိုဂရမ် တွေပါဘဲ။
လူတွေ ထက် ပိုပြီးမြန်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အစွမ်း ရှိပါတယ်။
လူတွေ ထက်ပိုပြီး ဘယ်လောက်သာတယ် လို့တောင် နှိုင်းမရနိုင်တဲ့ အချက်အလက် တွေ ကို မြောက်များစွာ သိမ်းနိုင်တာ၊ အဲဒါတွေ ကို ဖြတ်ကနဲ ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တာ တွေဟာ တကဲ့ အံ့မခန်း ပါ။
ဒါပေမဲ့ လူတွေ ကို ကျော်ပြီး လူတွေ ထက် ပိုပြီး ကောင်းအောင် သူ့ဟာသူ ဆန်းသစ်တီထွင် လာမယ် ဆိုတာတော့ ကျွန်မ သက်တမ်း မှာ မဖြစ်လောက်နိုင်သေးတာ ပြောနိုင်ပါသေးတယ်။
ကြောက်ရတာက လူလူချင်း ဒုက္ခပေးမဲ့ ပရိုဂရမ် ကို ရေးမဲ့ တီထွင် မဲ့ လူ ကိုသာကြောက် နေရတာမို့ လူ ကို လူချင်း က သတိပေးနေတာ လို့ သာ မြင်တာပါဘဲ။
လောလောဆယ် မြန်မာပြည် မှာတော့ ဘဏ်လို နေရာ တွေမှာတောင် လူ ကို အားပြုပြီး ဆားဗစ် ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံ က သိပ်ကြောက်စရာ မလိုသေးဘူး။
ကွန်ပျုတာ စနစ် ကြီး သာ တစ်ခုခု ဖြစ် လုပ်ငန်း တွေ အားလုံး ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားတော့မဲ့ တိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတွေ မှာ အသေအချာ တွေး ရင် အတော်ကြောက်ဖို့ ကောင်းသား။
မနေ့က တောင် မျက်စိရှေ့မှာ အမှိုက်လာသိမ်းတဲ့ ကား မှာ အမှိုက်ပုံး ကို မြှောက်တင်တဲ့ ခလုပ် ပျက်နေလားမသိ။
ဆွဲယူမဲ့ လက်တံ ထွက်မလာဘဲ တစ် နေတာလားမသိ။ ၁၅မိနစ်လောက် အမျိုးမျိုး လုပ်နေတာ။ ကား ကို စက်ပိတ်လိုက် ပြန်နိုးလိုက် ရှေ့တိုးလိုက် ဘရိတ်စောင့်အုပ် လိုက်။
ကိုယ်လဲ ကြည့်မနေ နိုင်တာ နဲ့ နောက် ဘာဖြစ်သွားလဲ တော့မသိ။
မရတဲ့ အဆုံး နောက် ကားတစ်စီး နဲ့ လာသိမ်း ရမှာပေါ့။
ဟိုတစ်ပါတ်ကလဲ လေဆိပ်မှာ ကွန်ပျုတာ စနစ် တစ်ခု ပျက်သွားလို့ လေယာဉ် တွေ အတက်အဆင်း လုပ်မရဘဲ နေ့ဝက်လောက် ဒုက္ခရောက်သွားသတဲ့။
နည်းပညာ တိုးတက်တာ ကို အကောင်းမြင် ဘက် ကလဲ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
အဆိုးမြင် ဘက်က လဲ ကြည့် ပြီး အမျိုးမျိုး ဝေဖန်နိုင် ကြောက်နေနိုင်ပါတယ်။
လက်တွေ့ မှာလဲ ကောင်းတာ ဆိုးတာ တွေ ကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ဒီကြားထဲ အခွင့်အရေးသမား တွေ ရဲ့ အသုံးချ လက်နက် အဖြစ် အနိုင်ကျင့်တာ တွေ လဲ ခံရပါတယ်။
တကယ်တော့ I am not robot … I am not clone ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ဆိုပြီး ဒီ တင် တစ်ခန်းရပ်ဖို့ ပါ။
သို့ပေသည့် မဟာသူကြီးမင်း ရဲ့ လိပ်ပြာ ဘက်ရောက်သွားပြီး အဲဒါကိုဘဲ ဗဟို ငြင်း (ဆွေးနွေး) ဖို့ အကြောင်း က အခုမှ စ တော့မှာပါ။
စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ အချိန်ပေး သည်းခံဖတ်ပေးကြသော ပိတ်သတ် ကြီး ကို ကြိုပြီး ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
ပြောမဲ့ အကြောင်း တွေ က ဆောင်းပါး တစ်ချို့ က နေ အခြေပြုပြီး ထင်ရာ နားလည် သလို ရေးထားတာ မို့ အမှန် တွေ လို့ အတိအကျမပြောနိုင် ကြောင်းလေးလဲ ပြောထားပါရစေ။
ကိုယ် ကျွမ်းဝင်မှု မရှိတဲ့ ပညာရပ်ပိုင်း တွေ မို့ တကဲ့ပညာရှင် တွေ ရဲ့ အသိ အမြင် နဲ့ ကွဲပြားနိုင်လို့ ပါ။
ဒါပေမဲ့ ရှုဒေါင့် တစ်ခု က နေ မှားမှား မှန်မှန် အဖြေရှာစရာ မလိုဘဲ တော့ ကြည့် နိုင် သိနိုင်တာမို့ လူပြိန်းတွေး နဲ့ဒီ စာလေး ကို ရေးပါတယ်။
လွဲ နေတယ် ထင်လဲ ပြင်ပေးဖို့ကို ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
သူကြီးမင်း က ပြောတယ်။
ကျုပ်ကတော့.. Butterfly Effect လိုမြင်သမို့…
အေအိုင်တွေ… သေသေချာချာဖမ်းဆုပ်ပြရင်း.. လူတွေကိုကျော်စားသွားမယ်… ထင်..။
ပုဂ္ဂလိကတဦးတယောက်ချင်းစီ၏ဘ၀ကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းသွားစေနိုင်သည်မက ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်ကမ္ဘာကြီးတခုလုံး၏ အချိုးညီလည်ပါတ်နေမှုကိုပင် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းသွားနိုင်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်။
တခုနှင့်တခုတို့သည် ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုမရှိသလိုနှင့် ရှိနေကြသည်သာဖြစ်၏။
သူ ရဲ့ Quote ကို မှား တယ် ထင်လို့ ဆွေးနွေးပွဲ ကို စိမ်ခေါ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ခုစီ မှန် နိုင် တဲ့ အချက် နှစ်ခု ကို သူ ဆက်ပေးလိုက်တာ လွဲ နေတယ် ထင်မိတာမို့
ဒီ အကြောင်း ဖြစ်သွားတာပါ။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို ဒီနေ့ ခေတ် ရဲ့ ကွန်ပျူတာ အစွမ်း ကြီး လာတာ မို့ သိပ္ပံပညာရပ် တွေ ကို ပိုပြီး ကြီးကျယ်အောင် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ သိပ္ပံပညာ ရပ်ပေါ်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမှ ကွန်ပျုတာ ဆိုတာ ပေါ်လာတာပါ။
အဲလိုပေါ်လာခြင်းဟာလဲ သိပ္ပံပညာ ရဲ့ လက်ချက်ပါဘဲ။
အဲဒီ ကြီးမြတ်လှတဲ့ စူပါဉာဏ်ကြီးရှင် သိပ္ပံပညာရှင် များ ဟာလဲ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ဟာကွက်ရှာပြီး သူများဟာ အပြစ်ပြော ကိုယ့်အကြံသစ် ကို ထုတ်ပြ နဲ့ ဒီလို သီအိုရီ အသစ် တွေ ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ ဖြစ်နေတာ ပါ။
အိုင်းစတိုင်း က နယူတန် ရဲ့ ဟာကွက် တွေ ကို ထောက်ပြခဲ့ သတဲ့။
သူ့ရဲ့ relativity သီအိုရီ E = mc² ကတော့ QM ဆိုတဲ့ Quantum mechanics ပေါ်အလာမှာ သူ့ချည်း အမှန် ဆိုတာ မဖြစ်တော့ဘူး။
နောက်ပိုင်း သူကြီးပြောတဲ့ Chaos Theory အရောက်မှာတော့ သဘာဝ တရားကြီး ထဲ မှာ ရှိနေတဲ့ အရာ အားလုံး ဟာ ဗရမ်းဗတာ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေ တတ်တဲ့ သဘောကို တွေ့သွားကြတယ်။
Chaos Theory ကို Quantum mechanics ရဲ့ Revolution လို့လဲ ပြောကြတယ်။
သဘောကတော့ အိုင်းစတိုင်း ရဲ့ E = mc² ပုံသေနည်း က အသေ တွက်ချက်မှု ဖြစ်လို့ ပါတဲ့ ကိန်းဂဏန်း တွေဟာ တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု ချိတ်ဆက်ပြီး ကြည့်နိုင်တယ်။
တစ်ခု အပေါ် တစ်ခု တည်မှီပြီး ပြောင်းကြတယ်။
အယ်လ်ဂျီဘရာ လို linear equation မို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်တယ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေ ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြိုမှန်းနိုင်တယ်။
Quantum mechanics ရဲ့ complex systems မှာတော့ အရာတွေဟာ သေချာတဲ့ ရှင်းပြချက် မရှိနိုင်ဘဲလဲ ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်စွမ်း ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ပညာရပ် က လူပြိန်းနားလည်သလို မို့ လွဲနိုင်တာလဲ ပြောပါရစေ။
QM ကို တွေ့ရှိသူ ကတော့ Max Born လို့ ခေါ်ပြီး သူတို့ သီအိုရီ တွေဟာ ၁၉၂၀ ဝန်းကျင် မှာ ခေတ်ပြိုင်ရုံမက သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ တက္ကသိုလ်တစ်ခု ထဲ က ပါမောက္ခတွေ ဖြစ်ခဲ့တာ။
အဲဒီ ကနေ Quantum Cat ဆိုပြီးလဲ Experience တစ်ခု ပေါ်လာသေးတယ်။ အဲဒီ Experience က ကြောင်တစ်ကောင် ရယ်၊ အဆိပ် ဓာတ်ဗူး ရယ်၊ ရေဒီရိုအက်တစ်ဗ် ဒီတက်တာ ရယ် ကို ပုံး တစ်ပုံး ထဲ ထည့်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။
၁၀ မိနစ် ကြာရင် ပုံးကို ဖွင့်ကြည့်ပေါ့။
အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ ဒီတက်တာ က ဓာတ်ဗူး ကို ပွင့်သွားစေနိုင်တယ်။ ဒါဆို ကြောင် အသေ တွေ့လိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ကြောင် အရှင် ကျန်မယ်ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ပြသနာ က ပုံး ကို ဖွင့်ချိန် မှာ အဲဒီ အက်ရှင်ကြောင့် လဲ ဒီတက်တာ က အလုပ်လုပ် သွားပြီး ကြောင် ကို သေစေမယ်။
မဟုတ်လဲ ကြောင် က အချိန်မှီ ခုန် ထွက်လာနိုင်မယ်။
ဒီတော့ ကြောင် သေခြင်း၊ ရှင်ခြင်း ဟာ ဘယ် အကြောင်း က ဖြစ်သွားစေတာလဲ အတိအကျ ပြောမရတော့ဘူး။
အဲဒါ ကို ဒီနေ့ထိ ဘယ်သူမှ အဖြေမဟုတ်နိုင်သေး လို့ လဲ နားလည်မိတယ်။
သဘောက အံဇာလှိမ့် သလို ကျချင်ရာ ကျပြီး ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်သွားမဲ့ အကြောင်းပေါ့။
ဒီ စမ်းသပ်ချက် က “အကြောင်း ကြောင့် အကျိုး ပေါ်” ဆိုတာ မှာ ဘာ အကြောင်း ကြောင့် ဒီ အကျိုး ဖြစ်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာကို အတိအကျ မဖော်ထုတ်နိုင် တဲ့ သဘော လဲ ရှိတာ ကို ပြောတာ။
အဲဒီ နောက်မှာ အိုင်းစတိုင်း ရဲ့ စကား တစ်ခု ထွက်လာတယ်။
“God doesn’t play dice” တဲ့။
ဒီလို နဲ့ သူတို့အချိန် တွေ ကို ကျော်ခဲ့ပြီး ကွန်ပျုတာခေတ် ရောက်တော့ အဲဒီ အတွက် ရှုပ်ထွေး တဲ့ တွက်ချက်မှု တွေ ကို အဖြေထုတ် စမ်းစစ်ဖို့ ကွန်ပျုတာ ဟာ မရှိ မဖြစ် တဲ့ လက်နက် တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
၁၉၆၀ လောက်မှာ Edward Lorenz ဆိုတဲ့ ပညာရှင် က မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းဖို့ Weather Model ပုံစံငယ် ကို ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် ရေးပြီး ဆောက်ခဲ့တယ်။
အချက်အလက် တွေ ထည့်လိုက်ရင် ကွန်ပျူတာ ကနေ အနာဂါတ် မှာ ဖြစ်နိုင်မဲ့ မိုးလေဝသ အခြေအနေ ကို ထုတ်ပေးတယ်။
သူ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေ ကျောင်းသား တွေ အားလုံး ကွန်ပျူတာ က နေ မြင်နေရတဲ့ တိမ်တွေ ပြောင်းသွားတာ၊ လေ တိုက်တာ၊ အပူ အအေး လှိုင်း တွေ ရွှေ့ တာ တွေ ကို ရင်သပ်ရှူမောပြီး ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။
အတိအကျ parameter တွေ ထည့်ရင် ထွက်လာတဲ့ ရလာဒ် ဟာလဲ မှန် နေတာ တွေ့ရတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ သူက ကွန်ပျုတာထဲ ထွက်လာတဲ့ ပုံ ကိုပိုကြည့်ကောင်း အောင်ပြင်ခဲ့ တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒေတာ တွေ ကို ပရိုဂရမ် ကို အစ ကနေ မစ ဘဲ အချိန် သက်သာ အောင် တစ်ဝက် က ဖြတ် ထည့်ခဲ့ တယ်။ အဲဒီ တစ်ဝက် က ဖြတ်ထည့်တာလဲ အရင် အတိုင်း ရတဲ့ အချက် ကိုဘဲ ထဲ့ခဲ့တာ။
အဲဒီ အချိန်တုန်း က ကွန်ပျူတာ ပေါ်က data ကို အပြင်မှာ printer ထုတ် ရင် အတိအကျ ထုတ်မပေးနိုင်သေးဘူး။ ဒသမ ၃ လုံးထိဘဲ စာရွက်ပေါ်မှာ ထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့ သူက တကယ် ထည့်ရမှာက 5.123456 ကို ပါမှာ ရတဲ့ 5.123 နဲ့ ထည့်လိုက် တယ်။
ကွာခြားချက် က 0.000456 လေးမို့ သိပ်မကွာဘူး လို့ သူ ယူ ဆခဲ့ ပေမဲ့ တကယ် အဖြေမှန် က နေပူ ရမှာ ကို မိုးရွာ တဲ့ အခြေအနေ ပြောင်း သွား တော့တာ။
ဒီမှာတင် သူ သတိပြုမိသွားတာ က သဘာဝ တရားကြီး ဟာ ပုံသေဘာကိုမှ မှန်းထားလို့ မရဘဲ အကြောင်း သေးသေးလေး ပြောင်းတာကလဲ (လိပ်ပြာ တောင်ပံ ပါးပါးလေး ခတ်တာတောင်မှ) ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နိုင်တာ ကိုပါ။
အဲဒီကနေ Chaos Theory ပေါ်လာပါတယ် လို့ ဆိုတာပါဘဲ။
(ဘာသာပြန် ရန် မောင်ဘလှိုင် အတွက် ချန်ထားပါတယ်၊ ပို လှတဲ့ စကားစု လေးရဖို့ ကူ ပါဦး) :))
Chaos Theory ကဘဲ ပြောထားသေးတာက
သဘာဝ တရား လောကကြီး ထဲ မှာ အဖြစ်အပျက် တွေ ဟာ နာရီချိန်သီး လို တစ်ချောင်း ထဲ ကဘဲ လှုပ်ရမ်းပြီး ပုံကားချပ် ကို ချယ် နေတာ မဟုတ်ဘူး တဲ့။
အဲဒီ လှုပ်နေတဲ့ ချိန်သီး ရဲ့ အောက်မှာ နောက်ထပ် ချိန်သီး တစ်ခု က အဆစ် လို ချိုး ပြီး ရမ်းနေသလို ပုံ ကားချပ် ကို ချယ်နေတာ မို့ တသမတ် ထဲ ဘာကိုမှ ခန့်မှန်း လို့ မရဘဲ သူ့ဟာသူ ရောက်ချင်တဲ့ နေရာရောက် ဆွဲချင်သလို ဆွဲ နေတာတဲ့။
(ပုံ ကို ကြည့်ပါ)
သိပ္ပံပညာ ဆိုတာ လဲ ဒီလို မသေချာတဲ့ အကြောင်းတွေ ကြားကဘဲ သေချာသလောက် ကို ကြိုးစား နေကြတာပါလေ။
Chaos Theory နောက်ပိုင်း အခုချိန် အထိတော့ အဲဒါဟာ မှား တယ် လို့ ပြောပြီး သက်သေပြနိုင်တဲ့ သီအိုရီ မထွက်လာသေးဘူး။
ဒီတော့ အဲဒီ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်တာ ဟာ random လို့ခေါ်နိုင်သလား။
ကြိုပြီး ရေးထားပြီး လား ဘယ်သူ မှ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။
တစ်နေ့တော့ ပြောနိုင်ချင် ပြောနိုင်လာမယ်။
အခု မှာတော့ မနက်ဖြန် မပြော နဲ့ နောက် စက္ကန့်ပိုင်း လေး အတွင်း တောင် အကြီးအကျယ် ပြောင်းသွားနိုင် တဲ့ သဘာဝ တရားကြီး ထဲ
အတိအကျ မသိနိုင်၊ မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ အနာဂါတ် ဘဝ ထဲ
ဗုဒ္ဓ ဟောကြားခဲ့ တဲ့ ဘာအရာမှ မမြဲဘူး ဆိုတာ လက်ကိုင်ထားရင်း
လိုသလို မဖြစ်ခဲ့ရင် အတိတ်ကံ ကို သာ ပုံ ရင်း
အသက်ရှု နေရခိုက်လေး ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ချင်တာသာ ဖြစ် (Whatever will be will be) ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကိုယ့်တာ ကိုယ်လုံ အောင် တတ်နိုင်သမျှ ဝီရိယ ထုတ်ရင်း
မကောင်းမှု နဲ နိုင်သမျှ နဲ မဲ့ ၊ သူတစ်ပါး ကို မထိခိုက် မဲ့ ဘဝ နေနည်း အတွက် သာ ကြိုးစားနေပါတယ် ပြောရင်း နိချုန်းဂုတ် လိုက်ပါတယ်။
ကဲ သူကြီး မင်း။
မနိုင်ရင်လဲ စစ်ကူ ခေါ်ချင်သလောက် ခေါ်ပေရော့။
ကျွန်မ ကတော့ Que Sera Sera ဘဲ။ lol:-)))))
​ကျော့်​ကို ​စောင်းဦးဘသန်း သီချင်းဖွင့်​ပြဘာ
ရော့ ရော့ စိတ်ချမ်းသာ အောင် နားထောင် ဟေ့။
ပွဲကြိုက်ခင် – စောင်းဦးဘသန်း :))
Doris Day ရဲ့ အဆိုနဲ့ မဟုတ်ပေမယ့် Whatever will be ကိုကြားဖူးနေတာတော့ ကြာပါပြီ။ classic english song တွေ စနားထောင်တတ်စကဆို ဒီသီချင်းရယ် Brian Hyland ရဲ့ Ginny Come lately ရယ် Elvis Presley ရဲ့ I Can’t Help Falling In Love With You ရယ်ဆိုတာ အသည်းဆွဲပေါ့။ တစ်လုံးမှ နားမလည်ဘဲ ယောင်ဝါးဝါး လိုက်ဆိုခဲ့ရတဲ့သီချင်းတွေပါ။
လူငယ်၊ လူလတ်၊ လူကြီး ဆိုတဲ့ အရွယ်သုံးခုမှာ ရှိလာတဲ့ မေးခွန်းတွေကို Whatever will be ဆိုတဲ့ အဖြေစကားကြားရရင် အပြင်မှာဆို တော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းမှာဖြစ်ပေမယ့် ဒီသီချင်းထဲမှာ ကြားရတော့ ကြည်နူးဖို့ကောင်းလိုက်တာ….
သြော် ဒါနဲ့… ဒီသီချင်းက ၁၉၅၆ခုနှစ်က အော်စကာ ( Academy Award ) ရ ထားတဲ့ သီချင်းဗျ
ဤသို့ကြံစည်ခြင်းသည် အကျိုးစီးပွားနှင့်မစပ်၊ မဂ်တည်းဟူသော အကျင့်မြတ်၏ အစမဟုတ်၊ ငြီးငွေ.ရန်၊ တပ်မက်ခြင်းကင်းရန်၊ ဒုက္ခချုပ်ရန်၊ ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်၊ ထူးသောဥာဏ်ဖြင့်သိရန်၊ ကိုယ်တိုင်သိရန်၊ တဏှာမှ လွတ်မြောက်ရန် မဖြစ်။
ဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့.. အဲလိုကိစ္စမျိုးတွေကို…ကြံစည်မယ်ဆိုတဲ့သူများကို… အထက်ကလိုပြောဟောလိုက်သဗျ…။
ဒါတွေကတော့.. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၂ထောင်ကျော်ကအတွေးအမြင်တွေပေါ့..။ ဥာဏ်မှမမှီကြတော့တာလေ…။
ဒီခေတ်မတော့.. ဖြစ်နေပုံက.. သမ္မတရီဂင်လက်ထက်က.. သမ္မတရီဂင်ထက်တောင်.. ဒီခေတ်..အလယ်တန်းကျောင်းသားတယောက်က..သတင်းအချက်အလက်..အသိသညာစုဆောင်းသိရှိရ လွယ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့.. ဆိုကြပါတယ်..။
သတင်း..အချက်အလက်.. ဗဟုသုတတွေက.. ပိုလွန်းမကလျှံကုန်ပြီလေ…။
မကြာမတင်ကာလမှာတင်.. ဘုရားသခင်အလိုတော်ကို.. လူတွေသိကြတော့မယ်… ဖြစ်..။
ကျုပ်အမေ.. ဘီပိုးနဲ့အသဲကင်ဆာဖြစ်ပြီးဆုံးတော့.. တွေးမိတယ်…။
သူက.. အဲလိုဖြစ်မှာအင်မတန်သတိထားတာမို့.. ကာကွယ်ဆေးလည်းထိုးထားတယ်..။
ဘယ်လိုကူးသွားနိုင်သလည်းတွေးမိတော့.. သွားဆရာဝန်ဆီသွားလိုက်တာကနေလို့.. ယူဆလို့ရပါတယ်..။
သွားဆရာဝန်က.. ဘီပိုးရှိနေတဲ့လူတယောက်ကို.. ကျုပ်အမေရဲ့ရှေ့ကပ်ရက်မှာ.. သွားကိစ္စလုပ်လိုက်ပုံပေါ်ပါတယ်..။
ညမအိပ်မှီ.. တီဗီပိုကြည့်ခဲ့လို့ အိပ်ယာထ.. တမိနစ်နောက်ကျခဲ့ရင်…/မကျခဲ့ရင်..။
ကားအစီးမှာ… ဓာတ်ဆီလျှော့နေလို့.. သွားထည့်လိုက်ဦးမယ်.. တွေးခဲ့လုပ်ခဲ့ရင်../မထည့်ခဲ့ရင်..။
ပျံနေတဲ့ငှက်က.. ကားမှန်ပေါ် မစင်စွန့်လိုက်လို့.. မှန်ဆင်းသုတ်ခဲ့ရရင်…/မသုတ်ခဲ့ရင်..။
ယင်ကောင်လေးတကောင်က.. မနက်သောက်တဲ့ကော်ဖီခွက်ထဲလာကျလို့.. ပြန်လဲခိုင်းခဲ့ရင်…/မခိုင်းခဲ့ရင်..။
ပိတုန်းလေးတကောင်က..အတောင်ခတ်သမို့.. ၀တ်မှုန်ကျပြီး.. ဟတ်ချိုးဖြစ်ခဲ့ရင်…/မဖြစ်ခဲ့ရင်..။
အဲလို ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ လူသား(တင်) ၇ ဘီလီယံဦးရေရှိသဗျ…။
ကမ္ဘာကြီးကို.. (သေးမွှား/ကြီးကျယ်) ပြောင်းယူသွားနိုင်…။
ခေးရော့ကို.. ဗရမ်းဗတာထဲက..စနစ်တကျဖြစ်နေခြင်း… လို့. ခေါ်ချင်…။
အချိန်ယူ ဖတ်ရဦးမယ့် ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ပေပဲ…
နည်းပညာ ဆာလောင်မှုမှသည်..နည်းပညာကို ခြေကာကာလက်ကာကာ ပြန် တားယူရတော့မယ့်…
အဲဒီ သီချင်းကို ငယ်ငယ်က သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာ။
What will be,will be လို့ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေက ဘာတွေ ဝေပြီ လဲ လို့ နောက်တတ်ကြတယ်။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သင်တော့ မေးခွန်း တခုရှိတယ်။
အကြောင်း တခုကြောင့် အကျိုး တခုဖြစ်တာလား။
အကြောင်းအများကြီးကြောင့် အကျိုး တခုဖြစ်တာလား။
ဆိုတော့ အဖြေက အကြောင်းအများကြီးကြောင့် အကျိုးအများကြီးဖြစ်ရတာပါတဲ့။
အဲဒီထဲကမှ ထင်ရှားတဲ့ အကြောင်း၊ပဓာနကျတဲ့အကြောင်း၊အခြားတပါးနဲ့ မဆက်ဆံတဲ့ အကြောင်း ကို ထောက်ပြီး အ၀ိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရဖြစ်တယ် စသဖြင့် ဟောပါသတဲ့။
အကြောင်းတွေကလည်း အမျိုးမျိုး -ထွက်လာတဲ့ အကျိုးတွေကလည်း အမျိုးမျိုးပါပဲ။
စက်ရုပ်တွေ မလုပ်နိုင်တာ တစ်ခု ကျန်သေးတယ်လို့ ပြောမို့။
စက်ရုပ်တွေ မချစ်တတ်သေးဘူးး မို့လားဟင်?
စက်ရုပ်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ အလုပ်အတွက် များများချစ်ကြတာကောင်းမလား??
မျက်စိသူငယ်နဲ့ ဖတ်လာလိုက်တာ ဖတ်နေတုန်းတော့နားလည်သလိုလိုနဲ့
.စာလည်းဆုံးရော ဘာဘာ ဘာမှမသိတော့ဝူးဗျ
.“Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)”သီချင်းလေးတော့ကြိုက်သဗျ
.ကက်ဆက်ခေတ်က တွမ်းတီးရီးယား ဘီဖိုး သီချင်းလေးတွေအမြဲနားထောင်ခဲ့တာ
.အကြောင်းဘယ်နှစ်ခုပေါင်းပြီး ဘယ်လောက်အကြာမှာ အကျိုး ဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့
ကျောင်းမှာတုန်းက ပုစ္ဆာတွေတွက်ရင် negligible amount ဆိုပြီး ဒဿ မတွေကို ဖြတ်ထုတ်ပစ်ရတယ်။
အဲဒီတုန်းက ဆရာတစ်ယောက်က အင်ဂျင်နီယာတွေ negligible amount ကနေ လေယာဉ်တွေပျက်ကျကုန်တော့တာပဲလို့ ရီစရာပြောခဲ့တာ သွားသတိရမိတယ်။ :p:
ဘ၀ဆိုတာ ဘာကိုမှ ကြိုမမြင်နိုင်တော့……….
What ever will be will be….. ပေ့ါ။
ကိုယ်တိုင်လဲ ကွန်ပူတာနယ်ပယ်(လို့ ပြောလို့ရတဲ့အထဲမှာ) ဆိုတော့
AI ကို သဘောကျတယ်။ အရင်ဆုံး ကိုယ်ကသင်ပေးရတာကိုး
ပြီးတော့ တွေ့ရှိမှု တစ်ခုဟာ အသုံးချတဲ့သူအပေါ်မူတည်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းတာဆိုတော့
ကောင်းတဲ့ဘက်မှာ သုံးရင် ကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်၊ အဆိုးဘက်မှာသုံးရင် ဆိုးကျိုးရမယ်
ရာနှုန်းပြည့် ကောင်းကျိုးပေးဖို့တော့ မဖြစ်နိုင် လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ (အဆိုးဘက်မှာ အများကြီး မသုံးကြဖို့ပဲ မျှော်လင့်ပါရဲ့)
chaos theory ကတော့ သူ့ definition အရဆိုရင်
အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် မှန်းဆတွက်ကိန်းတွေနဲ့တော့ အနာဂတ်ကို ဟောကိန်းမထုတ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောရမလားမသိ (နားလည်သလိုပြန်ကြည့်တာ ဟီးး)
သူ့ကို Butterfly effect နဲ့ ပြန်တွဲကြည့်မိတော့လည်း အဲ့လိုပဲမြင်မိတယ်။
သူဆက်စပ်ပြတာက လွဲသလားဆိုရင်တော့ မလွဲဘူး ဒါပေမယ့် လိုရာဆွဲယူထားတာကြီး
ကံ၊ ကံအကျိုး ဟာ လူတစ်ယောက်အပေါ်မှာ သက်ရောက်တယ်။
အဲဒီ “လူ” ကနေ သူနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သက်ရောက်မယ်။
ပတ်ဝန်းကျင် ကျယ်သလောက်၊ သူ့ရဲ့အရေးပါမှု များသလောက် သက်ရောက်မှု ပိုများလာမှာမို့ ဆက်စပ်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးလည်း ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့
တွေးကြည့်ရင်တော့ ဟုတ်တုတ်တုတ်၊ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ ကံ၊ ကံအကျိုးတွေကလည်း ဒီဖြစ်ရပ်တွေအပေါ် သက်ရောက်နေတာမို့ ကျန်သူတွေရဲ့ အားကိုပါထည့်တွက်ရမှာ
AI က စ ကတည်းက pre-calculated ဖြစ်ပြီးသား
အဲ့နှစ်ခုကို ဆွဲပြီး လိုရာဆွဲပလိုက်တော့ ဘယ်လိုပြောရပ (ဟီးးး ကျနော့်အမြင်သေးသေးလေးပါနော်)
နောက်ဆုံး သီချင်းကို ငြင်းရရင်
whatever will be will be ဆိုတာဟာ
ကံ အပေါ်မှာ လုံးလုံးလျားလျား မူတည်တဲ့သဘော ဖြစ်နေတာမို့
ကံ ယုံပြီး ဆူးပုံနင်းသလို ဖြစ်နေကြောင်းပါခင်ဗျာ။
ဆန္ဒတစ်ခုကို အကောင်အထည်ပေါ်လာအောင် ဉာဏ်နဲ့ ဝီရိယသုံးပြီး အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပါရဲ့နဲ့ ဖြစ်မလာတော့မှသာ အတိတ်ကံနဲ့ ဖြေသိမ့်ပါစို့လား :loll: :loll:
P.S. တစ်ခုချင်းစီ ပြောရင်း ကျနော့်အကျင့်အတိုင်း ဘေးတွေ အကုန်ရောက်သွားတာမို့ နားလည်သလိုသာ ဖတ်ကြပါတော့ဗျာ
ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ ကံ၊ ကံအကျိုးတွေကလည်း ဒီဖြစ်ရပ်တွေအပေါ် သက်ရောက်နေတာမို့ ကျန်သူတွေရဲ့ အားကိုပါထည့်တွက်ရမှာ
အဲဒါကြောင့်. အဲလိုစူပေါင်းအကြောင်းတွေကြောင့်.. အဲဒီအကျိုးတွေ.. ရလဒ်တွေက.. ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်တယ်ဆိုသလောက်အထိ.. ဖြစ်နိုင်ခြေတွေများကုန်တာ..
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စက်ဝိုင်းကို.. လူရဲ့ဘ၀တွေ..ရှေ့ဘ၀..နောက်ဘ၀တွေအထိ..ဖြန့်မကြည့်ပဲ.. ကိုယ့်ခန္ဓာထဲ.. အသေးမွှားဆုံးစိတ်ကလေးအထိ.. တနိုင်လေးဖြတ်ကြည့်..။
ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်..ဘယ်လိုအကျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့.. ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သိသွားရင်.. ရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့.. ဆိုချင်..။
The Giver လို ဖြစ်သွားမှာပေါ့ ( ဖတ်ပြီးပလား အရီး)
လူကိုတော့ မကျော်နိုင်ဘူး သေတာရှင်တာ သူထိန်းနိုင်တယ်ထားအုန်း
တနေ့မှာ ဒါဟာ အကောင်းထက် အဆိုးများလာတဲ့အခါ လူတွေ ကိုယ်တိုင် ရပ်ပစ်လိုက်မှာပဲ
နောက်တော့လည်း ကမ္ဘာပျက်ပြီး သံသရာတပတ်လည်အုန်းမှာပဲ
သိပြီးမြင်ပြီးသား လွတ်မဲ့လမ်းကိုလည်း ပြခဲ့ပြီးသား
အယူလွဲ ရေလိုက်လွဲတာကတော့ ကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်
ဆိုတော့ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုနဲ့ ကိုယ်ပါပဲ
မယုံသူက မယုံသလို ကျင့်ကြံ နေလိမ့်မယ် ယုံသူက ယုံသလို ကျင့်ကြံ နေထိုင်လိမ့်မယ်
သီချင်းအကြောင်းရေးတာမှတ်လို့ မဖတ်ဘဲနေနေတာ။ ဒါက သေချာဖတ်ကြည့်ရတော့မယ်။ အချိန်ကလည်း မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
သိပ်မီဝေးဒေါ့တဲ့ အနာဂတ်မှာ အတုတွေ အစစ်ထက် သာတော့မည်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်သဗျ။ hard ware ဗိုင်းကို ကျော်လို့ software ပိုင်းရောက်လာတော့မည်။ လူတွေ ဟိုးအယဉ်က အဂုလို ဖွဲ့နွှဲ့တွေးဓာတ် ကြူ ဓာတ်ကြဗူးဗျ.. ရှိပြီးသား စကားလုံး အတွေးအခေါ် အသိအမြင်တွေ အခြင်းခြင်း ဓာတ်ပြုရင်း အသစ်အသစ်တွေ ပေါက်ဖွားလာတာ မီဟုပ်လား။ ဒီလိုပဲ ကွန်ပြူ တာဥနှောက် အတုလည်း သူ့မှာရှိတဲ့ အချက်အလက် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုကနေ သူ့မှာ အယင်က မရှိတဲ့ လူက ထည့်မီပေးလိုက်တဲ့ အချက်အလက် အသစ်တွေ ပေါက်ဖွားလာမည်လို့ ထင်သာပဲ။ တခုရှိတာ သက်ရှိသတ္တဝါတွေလို အပြန်အလှန် မှီခိုနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝ ရေမြေဥတု သူ့မှာ မရှိဘူး.. အဲဒီအရာကိုသာ ဖန်တီးလိုက်နိုင်လျင် လူ့သားမျိုးနွယ်စု ရပ်တီမှုကို သေချာပေါက် ခြိမ်းချောက်မည့် သက်ရှိသတ္တဝါတမျိုး ဖြစ်လာပါမည်။